Amfụfụ roba warara nwere ihe dị iche iche. Ihe a na-ejikarị eme ya bụ EPDM. Anyị factory na-enye elu-edu na-abụghị nyagide akara akara, nke kwesịrị ekwesị maka nile di iche iche nke dị iche iche nke ụzọ na windo, dị ka osisi ụzọ, plastic-steel door, nche ụzọ, na-akpụ akpụ n'ọnụ ụzọ, eji ụzọ, auto auto etc. nwere akwụkwọ akụkọ na-enweghị njedebe na-enweghị ngwụcha nke mpempe akwụkwọ na ụfụfụ, gụnyere ọtụtụ akara azụmaahịa na akara akara BS, ọkachamara ọkachamara na ọkọlọtọ ọkọlọtọ gụnyere Viton, Neoprene, Nitrile, Silicone, EPDM, sponges and foam. Ogo anyị buru oke ibu ma anyị nwere ike belata nha ọ bụla iji chọọ ebe achọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọkachamara chọrọ, biko kpọtụrụ anyị.
A na-eji ihe eji emepụta roba na-ejide onwe ya na EPDM, a na-etinyekwa teepu dị iche na azụ nke ogbo roba. Roba EPDM nwere ọtụtụ elele, dị ka ezigbo ihu igwe, iguzogide ịka nka, ozone resistance, acid na alkali resistance.
Oge ndu anyị na-enye larịị rọba azụmahịa bụ 7-10 ụbọchị. Nrapado nkwado azụmahịa ntinye roba bụ ụbọchị 10-15, agbanyeghị anyị na-agbanwe agbanwe ma soro ndị ahịa anyị rụọ ọrụ iji hụ na anyị na-emezu atụmanya ha.